Ogaden News Agency (ONA) – Qarax Wayn oo Kadhacay Suuq Istanbuul Kuyaala Dhimasho & Dhaawacna Gaystay.
Qarax Wayn oo Kadhacay Suuq Istanbuul Kuyaala Dhimasho & Dhaawacna Gaystay.
Posted by ONA Admin	/ January 13, 2016
Madaxda Turkiga ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 qof ku dhinteen 15 kalena ay ku dhaawacmeen qarax xooggan oo ka dhacay, suuq center ah ooy caan ku yihiin dadka dalxiisayaasha ah ee Fagaaraha Sultanahmet magaalada Istanbul bartamaheeda.
Weerarkan ayaa la sheegayaa inuu fuliyey qof isku soo xidhy waxyaabaha qarxa, waxaana uu la beegsadey dalxiisayaal u dhashey dalka Jarmalka. Waxaa goobta qaraxu ka dhacay soo buux dhaafiyay gawaarida gar-gaarka deg-dega ah ciidamo Boolis ah, waxaana loo diiday warbaahintu inay halkaas sawiro kasoo qaataan.
Dad indhahooda ku arkaayey waxa ka dhacay meesha ayaa sheegaya in ay arkeen dad hilibkoodu jar-jarmey. Qof la hadlay wakaalada Wararka ee Reuters ayaa yiri ” Qaraxu wuxuu ahaa mid aad u culus. Waxaa ruxmey suuqa oo dhan, waxaana aragnay hilbo finiin ah oo dhulka daadsan ”.
Madaxwaynaha dalka Turkiga ayaa canbaareeyay weerarka Isanbul ka dhacay isagoo ka hadlay telefishanka qaranka ‘‘ Weerarkan waxa uu ahaa mid argagixiso waxaana fuliyay qof naftiisa qarxiyay kaasoo asalkiisu ka soo jeedo dalka Suuriya. Aad ayaan uga xunahay 10-ka qof oo uu dilay kuwaasoo isugu jira Turki iyo ajaanib kale ”. sidaas waxaa yi dhi Mdaxawaynaha Turkiga Ardogan.
Raysalwasaaraha Turkiga Ahmet Davutoğlu ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in ISIS ay ka danbeyso weerarka. Qofka weerarka fuliyey ayaa lagu sheegey magiciisa Nabil, waxaa u dhashey dalka Suuriya sida ay qortay warbaahinta Turkigu wuxuu dhashey 1988.
Dadka ku dhaawacmey ayaa la sheegayaa inay kamid yihiin 9 qof oo dalka Jarmalka u dhashay, sida laga soo xiganayo warbaahinta Turkiga ee Dogan. Ururka ISIS waxay maanta qarax kale la eegteen goobo ganacsi oo ku yaala magaalada Baqadaad ee dalka Ciraaq.